Ny niandohan'ny fahefana mainty - Documentary (2020) - Afrikhepri Fondation
Ny niandohan'ny herin'ny mainty - Documentary (2020)
Themanaitra ny tantaran'ny iray amin'ireo fikambanana manakorontana sy mampiady hevitra indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny aingam-panahy avy amin'ny Marxista-Leninista, ireo pantera mainty dia nanangana ny tenany ho fomba hafa ifandimbiasan'ny hetsiky ny zon'olombelona notarihin'i Martin Luther King. Manambatra ny arisiva tsy fahita firy sy ny fijoroana vavolombelona marobe, mitsoraka ao anaty "Power Black".
Oakland, California, 1966. Herintaona taorian'ny korontana Watts tany Los Angeles, mpianatra roa, Huey P. Newton sy Bobby Seale, no namorona vondrona mpiaro tena hanara-maso ny fihetsiky ny polisy tao amin'ny ghetto mainty. Tamin'ny fahatongavany, tamin'io taona io ihany, hetsika fanafahana politika afrikanina-amerikanina, ny Black Panther Party (BPP) dia nanjary feonà vondrom-piarahamonina iray feno herisetra tany Amerika anjakan'ny fotsy hoditra. Mikasika ny aingam-panahy avy amin'ny Marxista-Leninista, misongadina ny fikambanana ho toy ny safidy mahery vaika amin'ny hetsika zon'olom-pirenena notarihin'i Martin Luther King. Mifanindran-dàlana amin'ireo “fandaharam-pivelomany” (sakafo maraina tsy andoavam-bola ho an'ny ankizy, dispensary sns), dia mitaky ny hisian'ny fikomiana izy io. Teny filamatra, tapaka afro, totohondry nisondrotra: ny Black Panthers dia manokatra tolona vaovao ho an'ny vondrom-piarahamonina mainty. Ny FBI, matahotra ny aura amin'ny hetsika, anisan'izany ny tanora fotsy hoditra, dia manamafy ny faharanitan-tsaina. Ny fisamborana an'i Huey P. Newton, voarohirohy tamin'ny famonoana polisy, dia nanimba ny fikambanana. Tamin'ny 1968, ho valin'ny famonoana an'i Martin Luther King, ny mpitondra teniny, Eldridge Cleaver dia nandà tsy hitolo-batana taorian'ny duel natao tamin'ny polisy. Niditra an-tsesitany tany Algiers izy ary namorona ny sehatra iraisam-pirenena tao amin'ilay antoko tao.
"Omeo hery bebe kokoa ho an'ny vahoaka"
Hatramin'ny nahatongavany tao am-pon'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fianjerany tsy nisy indrafo, ny talen'ny Stanley Nelson dia mamantatra ny tantaran'ny Black Panthers izay mahavariana sy tsy dia fantatra loatra. Miady amin'ny fahamboniana fotsy sy ny kapitalisma, ireo mpikambana ao aminy dia nanamarika ny fiheverana iraisana tamin'ny hamoritana ny hafanam-pony, ny kabary ataon'izy ireo izay sady mahery setra no mampivondrona, fa koa ny fomba fiakanjony sy ny fomba fanaovan-dry zareo revolisionera fibodoana ny habaka ampahibemaso. Miaraka amin'ny fe-potoana fitopololahy sy feom-boninkazo mitondra ny lohateny hoe "Omeo hery bebe kokoa ho an'ny vahoaka" an'ny Chi-Lites, ity fanadihadiana ity dia mamerina ny hatsaran-tarehin'ny hatezerana nefa tsy manafina ny fijaliana sy ny lafiny maizina - ny herisetra sy ny ady amin'ny ego - amin'ny alàlan'ny arisiva tafatafa lehibe sy lalina amin'ny mpikatroka, maso ivoho FBI ary mpahay tantara. Notsiahiviny ihany koa fa ny fiandohany dia mbola manan-danja ankehitriny.
Lahatsary fanadihadiana nataon'i Stanley Nelson (Etazonia, 2020, 54mn)
Ny Dokotera Quantum - Amit Goswami (Audio)
Afro-taranaka tany Brezila sy Haiti: fianarana ny teolojia mainty
Ny saina sy ny eritreritra - Jiddu Krishnamurti (Audio)
Manokatra ny fanovana - Louise Hay (Audio)